အကင်ဆိုင်တွင်အလုပ်ရမည်ဆိုသဖြင့် လိုက်ပါသွားသည့်အမျိုးသမီး ၃ ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရ | Akonthi
၂၄ နာရီအတွင်း အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ထူးခြားလှုပ်ရှားမှုများ (၆၃၉)
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အလှူစာရင်းပေးထားသူများ ငွေပေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း
တရုတ်လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ကျူးကျော်လုပ်ကိုင်နေမှုများကို ဗဟိုအစိုးရအနေဖြင့်ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆို
“ဘာပဲဆောက်ဆောက် ခိုင်အောင်ဆောက်ပေးကြပါ” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသောနိုင်ငံများမှာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုပိုမိုခံစားကြရကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
“ပြည်သူ့ဒုက္ခ၊ ကိုယ့်ဒုက္ခ” ဟု အစိုးရကသဘောထားကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ပြော
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျပန်ဘုရင်သစ် ထီးနန်းတက်ပွဲ တက်ရောက်မည်
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ပွညျသူမြားအား အနိုငျရစခေငျြကွောငျး သူရဦးရှမေနျးပွော
ပွညျခိုငျဖွိုးပါတီမှ NLD ပါတီသို့ကူးပွောငျးသညျ့ပါတီဝငျမြားရှိသျောလညျး သတငျးတငျလမေ့ရှိဟု မုံရှာဦးအောငျရှငျ ပွော
ကုလသမဂ်ဂသညျ မွနျမာပွညျသူလူထု၏စိတျနှလုံးသားကိုဆုံးရှုံးနပွေီဟု ဆို
တရုတျစီးပှားရေးတိုးတကျမှု နှဈပေါငျး ၃၀ အတှငျး အနှေးဆုံးကာလသို့ရောကျရှိ
အဆုံးစီရင်သွားတဲ့ LGBT ကျော်ဇင်ဝင်းအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ့် ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်
အစားတစ်လိုင်းလေးတွေကို အားပေးလိုက်တဲ့ ရဲလေး
MRTV-4 တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသမည့် “အကြင်နာမြစ်ဖျား” ဇာတ်လမ်းတွဲ ခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ဖက်မှုမရှိဘူးလား
ဗီဒီယိုခေတ်ကနေ ယနေ့ချိန်ထိလက်တွဲလာခဲ့တဲ့ ခင်လှိုင်အကြောင်း ဂွမ်းပုံဖွင့်ပြော
တက်တူးတွေကြောင့် ခေါ်မရိုက်ချင်ရင်မရိုက်နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသမားဗျ လို့ ဆိုတဲ့ တိုင်ရွန်
အမှန်တရားပျောက်ကွယ်နေသူတွေအတွက် ဖြိုးပြည့်စုံအမှုက မီးမောင်းထိုးပြတာလို့ အနဂ္ဂပြော
ရွှေတိဂုံဘုရားပျောက်မှာစိုးလို့ နိုင်ငံခြားသွားမနေဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ ဦးမောင်မောင်မြင့်
ဒါရိုက်တာဆိုတာ စိတ်ရောလူရောပင်ပန်းလို့ လိုက်ပိတ်နေတာလို့ ခင်လှိုင်ဇနီးဆိုလာ
အရကျအမူးလှနျပွီးသနေတျပဈဖောကျသော BGF တပျဖှဲ့မှ တပျသားတဈဦးနှငျ့ တပျကွပျတဈဦးကို ဖမျးဆီးရမိ
အမျိုးသား ၁ ဦးအရက်ကြောင်ပြီး သံဃာတော် ၁ ပါးနှင့် ကျေးရွာသား ၁ ဦးအား ဓားဖြင့်လိုက်ထိုး
တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်း၏ ယာဉ် ၂ စီးမှာလိုင်စင်မဲ့ဖြစ်နေသဖြင့် တိုင်ကြားခံထားရ
လူသတ်တရားခံဟုသံသယရှိသူက ရဲတပ်ဖွဲ့အားစကေဘာဖြင့်တိုက်ခိုက်သောကြောင့် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရ
ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးကို တက်ကသိုလျကြောငျးသားက နခေ့ငျးကွောငျတောငျ အဓမ်မပွုကငျြ့
အ.လ.ကခှဲ(ရှလှေေ)ကြောငျးတှငျး ဝငျရောကျဆူပူခဲ့သောအမြိုးသားနှငျ့အပေါငျးအပါ ၃ ဦးအား ပုဒျမ ၂ ခုဖွငျ့ တရားစှဲဆို
လားရှိုးမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာတာဝန်ခံ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ခံရ
ကလေးသူငယျ လူကုနျကူးသူ ထိုငျးနိုငျငံသားကို စံခြိနျတငျအဖွဈ ထောငျ ၃၇၄ နှဈ ခမြှတျ
ကတျတလနျဒသေခံမြား ဆန်ဒထုတျဖျောမှု ပိုမိုအငျအားကွီးမားလာ
တခမျးတနား မင်ျဂလာပှဲကွီးလုပျပွီး သတို့သမီးကို ကုနျကစြရိတျအကွှေးတှနေဲ့ ထားပဈခဲ့တဲ့ ဘီလြံနာဆိုသူအား ဖမျးဆီး
အဖိုးအခ သကျသာ အာဟာရနညျးတဲ့ အသငျ့စားခေါကျဆှဲတှကွေောငျ့ အရှတေ့ောငျအာရှ ကလေးငယျတှေ ကနျြးမာရေးဥပါဒျဖွဈနေ
ဒူးရင်းသီးတွေထဲ ဘိန်းဖြူတွေ ၀ှက်ထည့်ကာ မှောင်ခိုကုန်ကူးရန် ကြိုးစားမှုကို မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ ဟန့်တားနိုင်ခဲ့
ကာ့ဒ်တပ်တွေ ဆုတ်ခွာရေးအတွက် ဆီးရီးယား ထိုးစစ် ဆိုင်းထားဖို့တူရကီက အမေရိကန်နဲ့ သဘောတူ
မကြုံစဖူး လူအစုလိုက် နယ်နှင်မှုအဖြစ် မက္ကဆီကိုက တရားမ၀င် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ၃၀၀ ကျော်ကို နေရပ်ပြန်ပို့ 
မူးယစ်ဂိုဏ်းဝင် သေနတ်သမားတွေက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ကာ ဖမ်းဆီးခံ မူးယစ် ရာဇာ အယ်ချာပို၏ သားကို ပြန်လု
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ်ပစ်ခတ်၍ အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးသေဆုံး
အှနျလိုငျးပျေါက ကလေးသူငယျ လိငျညဈညမျးဝကျဘျဆိုကျနဲ့ပတျသကျသူတှကေို စုံစမျးဖျောထုတျခဲ့ရာမှာ နိုငျငံပေါငျး ၃၈ နိုငျငံမှ လူ ၃၃၇ ဦး ဖမျးဆီးခံရ
ဒီမိုကရစေီထောကျခံ အမတျတှရေဲ့ ကနျ့ကှကျ နှောငျ့ယှကျမှုတှကွေောငျ့ ဟောငျကောငျ ဥပဒပွေုကောငျစီ အစညျးအဝေး ရပျစဲရပွနျ
အလဲထိုးခံရကာ ဦးနှောကျထိခိုကျခဲ့တဲ့ အမရေိကနျ လကျဝှသေ့မားတဈဦး သဆေုံး
ဆျောဒီမှာ ဘတျဈကားတဈစီး ယာဉျတိုကျမှုဖွဈပွီး မီးလောငျကာ နိုငျငံခွားသား ဘုရားဖူး ၃၅ ဦး သဆေုံး
တပျဖှဲ့ဝငျအခငျြးခငျြး ပဈခတျမှုကြူးလှနျလာခဲ့တဲ့ ထိုငျးတပျကွပျကွီးက စတိုးဆိုငျ ဝနျထမျးအား ဓါးစာခံလုပျပွီးနောကျ ကိုယျ့ခေါငျးကိုယျ သနေတျနဲ့ပဈ သကွေောငျးကွံ
ဖိလဈပိုငျမှာ ပွငျးအား ၆.၄ ရှိ ငလငျြလှုပျခတျခဲ့ကာ လူ ငါးဦး သဆေုံး
ဆီးရီးယားမွောကျပိုငျးမှ ဆုတျခှာသှားသော အမရေိကနျက ၎င်းငျးတို့စှနျ့ပဈခဲ့သညျ့ စဈစခနျးအား ပွနျလညျဗုံးကွဲဖကျြဆီး
ဟောငျကောငျလူထုကို ၂၀၂၀ ငွိမျးခမျြးရေး နိုဗယျဆုစာရငျးအတှကျ လြှောကျထား
ဘင်ျဂါလီ ဦးရေ ၅၀၀၀၀ ပါ အမညျစာရငျးသဈတဈခု ဘင်ျဂလားဒရှေျ့က မွနျမာကို လှဲပေးထား
2019-2020 မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ဝင်အသင်းများကို ထောက်ပံ့ကြေးပိုပေးသွားမယ်
မြို့နယ်ပေါင်း (၃၃၀)တွင် ဝက်သက်-ဂျိုက်သိုးကာကွယ်ဆေး အပိုဆောင်းတစ်ကြိမ်ထပ်မံထိုးပေးမည်
လက်ရှိဘ၀မှ မြင့်တက်တဲ့ဘ၀ကို ပြောင်းလဲနိုင်မယ့် စနေသားသမီးများ
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ (၅၉၁)
အဟောင်းကိုစွန့်၍ အသစ်ဖြင့်အောင်မြင်နိုင်မည့်အချိန်ရောက်နေတဲ့ သောကြာသားသမီးများ
၂၄ နာရီအတွင်း နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော မှုခင်းများ (၅၉၀)
ပညာကိုဦးစီးပေးမယ့် ပါမောက္ခကစာမဖတ်ဖူးဆိုရင် အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပဲ
ကြာသပတေးသားသမီးများ အိတ်စိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်နေရတတ်သလို နာမည်ကောင်းရဖို့ခဲယဉ်း
အကင်ဆိုင်တွင်အလုပ်ရမည်ဆိုသဖြင့် လိုက်ပါသွားသည့်အမျိုးသမီး ၃ ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရ
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့ရှိ အကင်ဆိုင်တွင်အလုပ်ရမည်ဟု သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ၏ စည်းရုံးပြောဆိုမှုကို ယုံကြည်မိ၍ လိုက်ပါသွားသော အမျိုးသမီး ၃ ဦး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရှမ်းစုကြီးအုပ်စုနေ မ…. (၁၉)နှစ်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံတွင် တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းအရ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့သည်။
မေးမြန်းချက်အရ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လပိုင်းက မိသားစုနှင့်အတူ နေအိမ်တွင်ရှိနေစဉ် ၎င်း၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဝေယံဦး(ခ)ခမိန်ကြီးတို့ သားအမိရောက်ရှိလာပြီး ဝေယံဦးမှ ၎င်းအား တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့ရှိ အကင်ဆိုင်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ပါက စရိတ်ငြိမ်းတစ်လလျှင် ငွေ ၃ သိန်းကျပ်ခန့် ရရှိမည် ဖြစ်ကာ လမ်းခရီးစရိတ်နှင့် အလုပ်ရရှိစေရန် ၄င်းတို့မှ အားလုံးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့ကြောင်း တွံတေးမြို့မရဲစခန်းမှ သိရသည်။
၎င်းနှင့် ဝေယံဦး(ခ)ခမိန်ကြီးသည် သူငယ်ချင်းများဖြစ်သလို မိဘချင်းကလည်း ရင်းနှီးနေ၍ လုပ်ကိုင်မည်ဟု သဘောတူခဲ့ပြီး ၂ ရက်ခန့်အကြာတွင် ဝေယံဦးသည် နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ပြောဆိုထားသည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လာရောက်ခေါ်ဆောင်သဖြင့် လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့ရှိ တရုတ်လင်မယားပိုင် အကင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် အလုပ်သွင်းပေးခဲ့၍ ထိုအကင်ဆိုင်တွင် လုပ်ကိုင်နေစဉ် ကြိုတင်ငွေ ၁၅ သိန်းအား ထုတ်ယူခဲ့ပြီး ဦးသန့်ဇင်မှတစ်ဆင့် မိဘများထံ ငွေလွှဲပို့ပေးခိုင်းခဲ့ကာ ယင်းအကင်ဆိုင်တွင် ၄ လခန့် လုပ်ကိုင်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူ နေမကောင်းသဖြင့် ပြန်လာခဲ့ရန် ပြော၍ နေရပ်သို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြန်ခါနီးတွင် ဦးသန့်ဇင်မှ နောက်ထပ်လုပ်ကိုင်မည့် အလုပ်သမားများရှိပါက ခေါ်ခဲ့ရန်နှင့် အစစရာရာ အားလုံးတာဝန်ယူကြောင်း ပြောဆိုခဲ့၍ ရွာသို့ပြန်ရောက်သောအခါ ရွာရှိ ညီမအရင်းဖြစ်သူ မ----- နှင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မ----- တို့အား အလုပ်အကိုင်ကောင်းကြောင်း ပြန်ပြောပြခဲ့ရာ ယင်းတို့မှ လုပ်ကိုင်မည်ဟု သဘောတူသဖြင့် ပြန်သည့်အချိန်တွင် လိုက်ခဲ့ရန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ဝေယံဦးနှင့် ဒေါ်မိကလယ်တို့ နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့ ၃ ဦးအတွက် ရွှေမန္တလာမှန်လုံယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်-မူဆယ်ကားလက်မှတ် ဝယ်ပေးထားသည်ဟု ပြောဆို၍ ၂၆.၇.၂၀၁၈ ရက်တွင် ၎င်းနှင့်အတူ ညီမအရင်းဖြစ်သူ မ---- နှင့် သူယ်ချင်း မ----- တို့ ၃ ဦးသည် ဦးသန့်ဇင်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ရွာမှ မူဆယ်မြို့သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မူဆယ်ကားဂိတ်တွင် ဦးသန့်ဇင်နှင့်အတူ ၎င်း၏နောက်မိန်းမ မပိုပိုနှင့် မပိုပို၏သား အောင်မိုးကျော် (ခ)အကြီးကောင်တို့မှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး ၎င်းနှင့် သူငယ်ချင်း မ----- တို့အား ၇ ရက် ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ်ဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့ရှိ အိမ်တစ်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ညီမဖြစ်သူ မ-----မှာ (၁၇)နှစ်သာရှိသေး၍ အောင်မိုးကျော်(ခ)အကြီးကောင်က ခိုးဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီ မြို့သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၎င်းတို့ ၃ ဦးသည် အဆိုပါနေအိမ်၌ ၂၀ ရက်ခန့် နေထိုင်ပြီးနောက် ယင်းအိမ်သို့ တရုတ်အမျိုးသား ၂ ဦး ရောက်ရှိလာ၍ ဦးသန့်ဇင်မှ ၎င်းအား အလုပ်ရှင်၏တပည့်များဖြစ်ပြီး အလုပ်လုပ်ရန် လိုက်သွားဟုပြော၍ လိုက်သွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ညီမဖြစ်သူ မ---- နှင့် သူငယ်ချင်း မ----တို့မှာ အဆိုပါနေအိမ်တွင် ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် တရုတ် အမျိုးသား ၂ ဦးနှင့်အတူ ကားဖြင့်လိုက်ပါလာခဲ့ရာ တိုက်ခန်းတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါတိုက်ခန်းတွင် နောက်ထပ် တရုတ်အမျိုးသား ၁ ဦးမှ လာရောက်ခေါ်ဆောင်၍ လိုက်ပါသွားခဲ့ရာ အမည်မသိ ဝက်မွေးမြူရေးခြံတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားပြီး ထိုတရုတ်အမျိုးသားနှင့် အလိုမတူဘဲ လင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်အမျိုးသားနှင့် ပေါင်းသင်းနေစဉ် ၎င်းအား ဦးသန့်ဇင်တို့ထံမှ တရုတ်ငွေ ယွမ် ၇၀၅၀၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့ရဟု တရုတ်အမျိုးသားပြောပြ၍ သိရခဲ့ပြီး ဦးသန့်ဇင်၏ တရုတ်ဖုန်းနံပတ်အား ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းခဲ့ရာ တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ညီမ ၂ ဦးအတွက် ၃၅ သိန်းနှင့် သူငယ်ချင်း မ…အတွက် ငွေ ၃၂ သိန်းကို မိသားစုများထံ ငွေလွှဲပို့ပေးထားပြီး ကျန်ငွေများကို ယင်းတို့၏ကိုယ်ကျိုးအတွက် ရယူသုံးစွဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မ.. နှင့် ညီမဖြစ်သူ မ….တို့၏ တရုတ်ဖုန်းနံပတ်များရရှိ၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ တရုတ်အမျိုးသားများထံ ဇနီးမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံနေရပြီး အလိုမတူဘဲ ပေါင်းသင်းနေရကြောင်းနှင့် မည်သည့်နေရာသို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို မသိကြောင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်အမျိုးသားမှ ဖုန်း ပေးမကိုင်သဖြင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခဲ့ကာ တရုတ်အမျိုးသားနှင့် ပေါင်းသင်းနေစဉ် ၃ လခန့် အကြာတွင် ယင်းတရုတ်အမျိုးသားအလစ်၌ ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မ------ တို့ ၃ ဦးကို တရုတ်နိုင်ငံရှိ အကင်ဆိုင်တွင် အလုပ်ရမည်ဟု စည်းရုံးပြောဆိုခဲ့ပြီး တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားကာ ရရှိခဲ့သည့်အကျိုးအမြတ်ငွေများကို ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ထုတ်ယူခဲ့သော ဦးသန့်ဇင်၊ ဒေါ်မိကလယ်(ခ)ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်၊ ဝေယံဦး(ခ)ခမိန်ကြီး၊ မပိုပို၊ အောင်မိုးကျော်(ခ)အကြီးကောင်တို့ ၅ ဦးကို တွံတေးမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၉၄၈/၂၀၁၈၊ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ- ၂၈(က) ဖြင့် စုံစမ်းနေကြောင်း သိရသည်။
- နိုင်မင်းလွင်(အကုန်သိ သတင်းဌာန)
အကငျဆိုငျတှငျအလုပျရမညျဆိုသဖွငျ့ လိုကျပါသှားသညျ့အမြိုးသမီး ၃ ဦး တရုတျမယားအဖွဈ ရောငျးစားခံရ
တရုတျနိုငျငံ၊ ရှလေီမွို့ရှိ အကငျဆိုငျတှငျအလုပျရမညျဟု သူငယျခငျြးဖွဈသူ၏ စညျးရုံးပွောဆိုမှုကို ယုံကွညျမိ၍ လိုကျပါသှားသော အမြိုးသမီး ၃ ဦး တရုတျမယားအဖွဈ ရောငျးစားခံရမှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ တှံတေးမွို့နယျ၊ ရှမျးစုကွီးအုပျစုနေ မ…. (၁၉)နှဈသညျ နိုဝငျဘာလ ၂၈ ရကျ၊ နံနကျပိုငျးက တရုတျနိုငျငံတှငျ တရုတျမယားအဖွဈ ရောငျးစားခံရပွီး ပွနျလညျရောကျရှိလာကွောငျး သတငျးအရ သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားက သှားရောကျမေးမွနျးခဲ့သညျ။
မေးမွနျးခကျြအရ ၎င်းငျးသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ မတျလပိုငျးက မိသားစုနှငျ့အတူ နအေိမျတှငျရှိနစေဉျ ၎င်းငျး၏သူငယျခငျြးဖွဈသူ ဝယေံဦး(ခ)ခမိနျကွီးတို့ သားအမိရောကျရှိလာပွီး ဝယေံဦးမှ ၎င်းငျးအား တရုတျနိုငျငံ၊ ရှလေီမွို့ရှိ အကငျဆိုငျတှငျ အလုပျလုပျကိုငျပါက စရိတျငွိမျးတဈလလြှငျ ငှေ ၃ သိနျးကပျြခနျ့ ရရှိမညျ ဖွဈကာ လမျးခရီးစရိတျနှငျ့ အလုပျရရှိစရေနျ ၎င်းငျးတို့မှ အားလုံးတာဝနျယူဆောငျရှကျပေးမညျဖွဈကွောငျး ပွောဆိုစညျးရုံးခဲ့ကွောငျး တှံတေးမွို့မရဲစခနျးမှ သိရသညျ။
၎င်းငျးနှငျ့ ဝယေံဦး(ခ)ခမိနျကွီးသညျ သူငယျခငျြးမြားဖွဈသလို မိဘခငျြးကလညျး ရငျးနှီးနေ၍ လုပျကိုငျမညျဟု သဘောတူခဲ့ပွီး ၂ ရကျခနျ့အကွာတှငျ ဝယေံဦးသညျ နအေိမျသို့ ရောကျရှိလာကာ ပွောဆိုထားသညျ့ အလုပျလုပျကိုငျရနျ လာရောကျချေါဆောငျသဖွငျ့ လိုကျပါသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ထို့နောကျ တရုတျနိုငျငံ၊ ရှလေီမွို့ရှိ တရုတျလငျမယားပိုငျ အကငျဆိုငျတဈဆိုငျတှငျ အလုပျသှငျးပေးခဲ့၍ ထိုအကငျဆိုငျတှငျ လုပျကိုငျနစေဉျ ကွိုတငျငှေ ၁၅ သိနျးအား ထုတျယူခဲ့ပွီး ဦးသနျ့ဇငျမှတဈဆငျ့ မိဘမြားထံ ငှလှေဲပို့ပေးခိုငျးခဲ့ကာ ယငျးအကငျဆိုငျတှငျ ၄ လခနျ့ လုပျကိုငျပွီး မိခငျဖွဈသူ နမေကောငျးသဖွငျ့ ပွနျလာခဲ့ရနျ ပွော၍ နရေပျသို့ ပွနျလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ပွနျခါနီးတှငျ ဦးသနျ့ဇငျမှ နောကျထပျလုပျကိုငျမညျ့ အလုပျသမားမြားရှိပါက ချေါခဲ့ရနျနှငျ့ အစစရာရာ အားလုံးတာဝနျယူကွောငျး ပွောဆိုခဲ့၍ ရှာသို့ပွနျရောကျသောအခါ ရှာရှိ ညီမအရငျးဖွဈသူ မ----- နှငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ မ----- တို့အား အလုပျအကိုငျကောငျးကွောငျး ပွနျပွောပွခဲ့ရာ ယငျးတို့မှ လုပျကိုငျမညျဟု သဘောတူသဖွငျ့ ပွနျသညျ့အခြိနျတှငျ လိုကျခဲ့ရနျပွောဆိုခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
နောကျတဈနတှေ့ငျ ဝယေံဦးနှငျ့ ဒျေါမိကလယျတို့ နအေိမျသို့ ရောကျရှိလာပွီး ၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးအတှကျ ရှမေန်တလာမှနျလုံယာဉျဖွငျ့ ရနျကုနျ-မူဆယျကားလကျမှတျ ဝယျပေးထားသညျဟု ပွောဆို၍ ၂၆.၇.၂၀၁၈ ရကျတှငျ ၎င်းငျးနှငျ့အတူ ညီမအရငျးဖွဈသူ မ---- နှငျ့ သူယျခငျြး မ----- တို့ ၃ ဦးသညျ ဦးသနျ့ဇငျ၏ အစီအစဉျဖွငျ့ ရှာမှ မူဆယျမွို့သို့ သှားရောကျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
မူဆယျကားဂိတျတှငျ ဦးသနျ့ဇငျနှငျ့အတူ ၎င်းငျး၏နောကျမိနျးမ မပိုပိုနှငျ့ မပိုပို၏သား အောငျမိုးကြျော (ခ)အကွီးကောငျတို့မှ လာရောကျချေါဆောငျပွီး ၎င်းငျးနှငျ့ သူငယျခငျြး မ----- တို့အား ၇ ရကျ ယာယီနိုငျငံကူး လကျမှတျဖွငျ့ တရုတျနိုငျငံ၊ ရှလေီမွို့ရှိ အိမျတဈအိမျသို့ ချေါဆောငျသှားခဲ့ပွီး ညီမဖွဈသူ မ-----မှာ (၁၇)နှဈသာရှိသေး၍ အောငျမိုးကြျော(ခ)အကွီးကောငျက ခိုးဝငျပေါကျမှတဈဆငျ့ တရုတျနိုငျငံ၊ ရှလေီ မွို့သို့ ချေါဆောငျလာခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျးတို့ ၃ ဦးသညျ အဆိုပါနအေိမျ၌ ၂၀ ရကျခနျ့ နထေိုငျပွီးနောကျ ယငျးအိမျသို့ တရုတျအမြိုးသား ၂ ဦး ရောကျရှိလာ၍ ဦးသနျ့ဇငျမှ ၎င်းငျးအား အလုပျရှငျ၏တပညျ့မြားဖွဈပွီး အလုပျလုပျရနျ လိုကျသှားဟုပွော၍ လိုကျသှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ညီမဖွဈသူ မ---- နှငျ့ သူငယျခငျြး မ----တို့မှာ အဆိုပါနအေိမျတှငျ ကနျြရဈခဲ့ပွီး ၎င်းငျးသညျ တရုတျ အမြိုးသား ၂ ဦးနှငျ့အတူ ကားဖွငျ့လိုကျပါလာခဲ့ရာ တိုကျခနျးတဈခုသို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး အဆိုပါတိုကျခနျးတှငျ နောကျထပျ တရုတျအမြိုးသား ၁ ဦးမှ လာရောကျချေါဆောငျ၍ လိုကျပါသှားခဲ့ရာ အမညျမသိ ဝကျမှေးမွူရေးခွံတဈခုသို့ ရောကျရှိသှားပွီး ထိုတရုတျအမြိုးသားနှငျ့ အလိုမတူဘဲ လငျမယားအဖွဈပေါငျးသငျးခဲ့ရကွောငျး သိရသညျ။
တရုတျအမြိုးသားနှငျ့ ပေါငျးသငျးနစေဉျ ၎င်းငျးအား ဦးသနျ့ဇငျတို့ထံမှ တရုတျငှေ ယှမျ ၇၀၅၀၀ ဖွငျ့ ဝယျယူခဲ့ရဟု တရုတျအမြိုးသားပွောပွ၍ သိရခဲ့ပွီး ဦးသနျ့ဇငျ၏ တရုတျဖုနျးနံပတျအား ဆကျသှယျ၍ မေးမွနျးခဲ့ရာ တရုတျမယားအဖွဈ ရောငျးစားခဲ့သညျမှာ မှနျကနျကွောငျး၊ ၎င်းငျးတို့ညီမ ၂ ဦးအတှကျ ၃၅ သိနျးနှငျ့ သူငယျခငျြး မ…အတှကျ ငှေ ၃၂ သိနျးကို မိသားစုမြားထံ ငှလှေဲပို့ပေးထားပွီး ကနျြငှမြေားကို ယငျးတို့၏ကိုယျကြိုးအတှကျ ရယူသုံးစှဲခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
သူငယျခငျြးဖွဈသူ မ.. နှငျ့ ညီမဖွဈသူ မ….တို့၏ တရုတျဖုနျးနံပတျမြားရရှိ၍ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ရာ တရုတျအမြိုးသားမြားထံ ဇနီးမယားအဖွဈ ရောငျးစားခံနရေပွီး အလိုမတူဘဲ ပေါငျးသငျးနရေကွောငျးနှငျ့ မညျသညျ့နရောသို့ ရောကျရှိနသေညျကို မသိကွောငျး၊ နောကျပိုငျးတှငျ တရုတျအမြိုးသားမှ ဖုနျး ပေးမကိုငျသဖွငျ့ အဆကျအသှယျပွတျတောကျခဲ့ကာ တရုတျအမြိုးသားနှငျ့ ပေါငျးသငျးနစေဉျ ၃ လခနျ့ အကွာတှငျ ယငျးတရုတျအမြိုးသားအလဈ၌ ထှကျပွေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ မ------ တို့ ၃ ဦးကို တရုတျနိုငျငံရှိ အကငျဆိုငျတှငျ အလုပျရမညျဟု စညျးရုံးပွောဆိုခဲ့ပွီး တရုတျမယားအဖွဈ ရောငျးစားကာ ရရှိခဲ့သညျ့အကြိုးအမွတျငှမြေားကို ခေါငျးပုံဖွတျ အမွတျထုတျယူခဲ့သော ဦးသနျ့ဇငျ၊ ဒျေါမိကလယျ(ခ)ဒျေါသနျးသနျးမွငျ့၊ ဝယေံဦး(ခ)ခမိနျကွီး၊ မပိုပို၊ အောငျမိုးကြျော(ခ)အကွီးကောငျတို့ ၅ ဦးကို တှံတေးမွို့မရဲစခနျးက (ပ)၉၄၈/၂၀၁၈၊ လူကုနျကူးမှု တားဆီးကာကှယျရေးဥပဒပေုဒျမ- ၂၈(က) ဖွငျ့ စုံစမျးနကွေောငျး သိရသညျ။
- နိုငျမငျးလှငျ(အကုနျသိ သတငျးဌာန)
မှနျပွညျနယျ၊ ပေါငျမွို့နယျရှိကြေးရှာအတှငျးအရကျအမူးလှနျပွီးသနေတျပဈဖောကျသော BGF တပျဖှဲ့မှ တပျသားတဈဦးနှငျ့ တပျကွပျတဈဦးကိုဖမျးဆီးရမိပွီဖွဈကွောငျးပေါငျမွို့မရဲစခနျးမှ သိရသညျ။
အမျိုးသား ၁ ဦးက အရက်ကြောင်ပြီးနောက် သံဃာတော် ၁ ပါးနှင့် ကျေးရွာသား ၁ ဦးအား ဓားဖြင့်လိုက်လံထိုးမှု မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တာချီလတ်နာရေးကူညီမှုအသင်းအသုံးပြုနေသည့် လူနာတင်ယာဉ် ၂ စီးမှာ လိုင်စင်မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် သိမ်းဆည်းအရေးယူပေးရန်တိုင်ကြားခဲ့သည့်အပြင် အသုံးပြုခွင့်ချပေးထားသည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ကိုလည်း အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တိုင်ကြာ
ဓားထိုးလူသတ်မှုမှ ထွက်ပြေးသွားသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံဖမ်းဆီးရာ စကေဘာဖြင့်ပြန်လည် တိုက်ခိုက်သောကြောင့် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှု ကျောက်တံခါးမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အမြားသူငှာအသုံးပွုနသေညျ့ ကြေးရှာသုံးကနျတှငျ ရခြေိုးနသေညျ့ ဆယျကြျောသကျမိနျးကလေးကို တက်ကသိုလျကြောငျးသားက အနိုငျပွုကငျြ့ကာအလိုမတူအတငျးအဓမ်မပွုကငျြ့သှားသညျ့ဖွဈစဉျတဈခု သာစညျမွို့နယျတှငျဖွဈပှားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
အ.လ.ကခှဲ(ရှလှေေ)ကြောငျးတှငျး ဝငျရောကျဆူပူခဲ့သောအမြိုးသားနှငျ့အပေါငျးအပါ ၃ ဦးအား ပုဒျမ- ၄၅၁၊ ၁၈၆ တို့ဖွငျ့တရားစှဲဆိုလိုကျပွီဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေ လိုအပ်ချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ ဒုသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေပြော (ရုပ်သံ)
ပြည်တွင်းချွတ်ခြုံ ကျနေခြင်းများကို လမ်းကြောင်းလွှဲရန် အသုံးမကျသော အစိုးရက စစ်လိုလားပြနေ ဟု ယူကရိန်းကို ပူတင် ပြော
သတ်မှတ်ကာလရောက်ပါက စည်းကမ်းမဲ့လမ်းဖြတ်ကူးသူများကို ဥပဒေတိုင်းအရေးယူတော့မည်ဟု ဆို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများတားဆီးဖမ်းမိရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်နေဟု ဆို
သဒေဏျခမြှတျခံရတဲ့ ဝငျးနဲ့ဇျောအမှုတရားရုံးလုပျရပျကို ထိုငျးရှနေ့ကေောငျစီက သဘောမတူ
ရွေးချယ်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘ၀ကို ပျော်အောင်ပဲ နေတယ်